एकै दिन थपिए अहिलेसम्मकै बढी कोरोना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति थपिए ? [हेर्नुस विवरण] – Rapti Khabar
असोज २४, काठमाडौं, पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ५ हजार ८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
शनिबार ५ हजार ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।
आज थपिएको यो संख्यासहित संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ५६८४ पुगेको हो। पछिल्लो २४ घण्टामा १२२९ जना डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या ७४२५२ पुगेको छ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १४ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। योसहित कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६१४ पुगेको छ।
हाल देशभर सक्रिय संक्रमित ३० हजार ८ सय १८ रहेका छन्।
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको लगानीले मनग्गे धनलाभ हुनेछ। पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। बृष […]
ना’जुक छ सीमामा भारतीय सै’निकको अवस्था, रसदपानी ओसार्न गाउँलेले सघाउँदैछन्
असोज ५, काठमाडौँ, लद्दाखमा भारत र चीनबीचको वि’वादित र तना’वग्र’स्त सीमा क्षेत्र अत्यन्त कठिन भूगोलमा पर्छ। सीमाबाट भारततर्फ सबैभन्दा नजिक रहेकामध्ये एउटा गाउँ हो चुसुल। करिब डेढ सय परिवार बस्ने यो गाउँ १५ हजार फिटको उचाइमा छ। त्यही गाउँका झण्डै एक सय जना महिला, पुरुष र किशोरहरु गह्रौँ झोला, चामलको बोरा, इन्धनलगायतका सामग्री पिठ्युँमा बोकेर […]